Otu esi ehichapụ akaụntụ Aliexpress gị, site na nzọụkwụ | Nzukọ mkpanaka
Cristian Garcia | 24/09/2021 09:09 | Internet, Nkuzi
Ọtụtụ ihe nwere ike ime nke ị ga -ekpebi hichapụ akaụntụ Aliexpress gị, gụnyere enweghị afọ ojuju maka ịzụrụ ihe ma ọ bụ kpebie na agaghị azụta ọzọ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Maka nke a, ọbụlagodi na ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịntanetị ama ama ma ọ bụ ibe weebụ ecommerce, ị nwere ike nwee ezi ihe kpatara ya. Ọ dịkwa karịa, na -enweghịkwa ngọpụ, n'ihi na ọ bụ gị nwe data nke gị. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji kụziere gị otu esi ewepụ aha na webụsaịtị n'ụzọ dị iche iche ka data gị ghara ịdị na nchekwa data Aliexpress.
Ị nwedịrị ike inwe obi abụọ ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ ya wee chee na data gị ka dị na nchekwa data Aliexpress, ya bụ, ịchọrọ ijide n'aka na ehichapụla ihe niile kpamkpam. Anyị na -atụ anya na ọ bụrụgodi na ihichapụ akaụntụ gị na Aliexpress, ị ga -arịọrịrị ozugbo n'aka ụlọ ọrụ ahụ ka ewepu data a kpamkpam na nchekwa data gọọmentị ya. Anyị ga -akpọrọ gị ka ihichapụ akaụntụ mana mgbe ahụ na ngalaba nzuzo nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe gị ị ga -arịọ ya. Echegbula, a ga -enwekwa obere ntuziaka maka nke a na njedebe nke akụkọ a.
1 Otu esi ehichapụ akaụntụ na Aliexpress?
1.1 Hichapụ akaụntụ Aliexpress na kọmputa
1.2 Hichapụ akaụntụ Aliexpress na ekwentị mkpanaaka
1.3 Hichapụ akaụntụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi
Otu esi ehichapụ akaụntụ na Aliexpress?
Dịka anyị na -agwa gị, ka ihichapụ akaụntụ Aliexpress gị, ị ga -enwe ike ime ya site na ebe abụọ, webụsaịtị ecommerce gọọmentị ma ọ bụ otu ekwentị mkpanaaka. N'ezie, na saịtị abụọ ahụ, ị ​​ga -eji usoro gọọmentị mee ya. Mana ihe niile nwere nkọwa nke ya na ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga -akọwa ka esi eme ya ruo mgbe anyị ruru ruo nhichapụ akaụntụ ahụ kpamkpam.
Hichapụ akaụntụ Aliexpress na kọmputa
Echegbula n'ihi na ihichapụ akaụntụ ga -adị mfe. Naanị ị ga -eso usoro ndị anyị nyere gị n'okpuru. Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịga na webụsaịtị Aliexpress wee jiri aha njirimara na paswọọdụ gị banye. Dị ka a ga -asị na ị ga -azụ ahịa nkịtị na nke ugbu a. Si ebe a soro usoro ndị a:
Tinye profaịlụ Aliexpress akpọrọ My Aliexpress
Ugbu a tinye ntọala akaụntụ gị ma emesịa gaa na ngalaba nke gbanwee profaịlụ onye ọrụ.
Ugbu a ebe ị deziri data profaịlụ gị, ị ga -enwekarị pịa bọtịnụ na -acha anụnụ anụnụ iji gbanyụọ akaụntụ, n'agbanyeghị na ọ na -abụkarị na Bekee "Gbanyụọ Akaụntụ"
Ugbu a, ihe a ga -achọ n'aka gị bụ nke ahụ gosi deactivation nke akaụntụ wee tinye ụfọdụ ozi ndị ọzọ dị mkpa ị ga -ama ka esi dejupụta, dị ka ihe kpatara ịchọrọ iji mebie akaụntụ gị. N'ebe a, ị nwekwara ike wepu ozi ịntanetị gị kpamkpam ka ị ghara ịnata ozi azụmahịa na ihe ndị ọzọ metụtara Aliexpress.
Buru n'uche na site n'ịgbaso usoro ndị a niile, ị ga -atụfu akaụntụ gị niile na ohere ya. Ị ga -efufu kọntaktị gị niile, ozi na mbipụta niile ị mere na Aliexpress ecommerce na onye nwe ya Alibaba. Arịrịọ gị niile ga -ahazi ya n'ime awa 24 sochirinụ ya mere enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ị ka nwere ike ịbanye ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Hichapụ akaụntụ Aliexpress na ekwentị mkpanaaka
Ọ bụrụ na ihe ị na -achọ bụ ka ihichapụ akaụntụ Aliexpress na ekwentị mkpanaka gị, ị ga -achọpụta na usoro niile ị ga -eso yiri nke anyị hụburu na ime ya na kọmputa nke gị. N'ezie, enwere obere nzọụkwụ ị ga -amatarịrị ka ị nwee ike ime ya site na ekwentị n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ya ebe ahụ ị ga -arịọrịrị ụdị nke desktọpụ ahụ. Nke ahụ bụ, ị ga -eme usoro ahụ niile dị ka a ga - asị na ị na - eme ya na PC mana na ekwentị mkpanaaka. Iji mee nke a, ị ga -eso usoro ndị a:
Ị nwere ike mepee taabụ ihe nchọgharị wee si ebe ahụ banye Weebụsaịtị Aliexpress.
Ugbu a banye ntọala site na ịpị bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri elu.
N'ebe a, ị ga -enwe nhọrọ ịkara nlele kọmputa. Enwere ike ide ya n'ụzọ dị iche mana ọ ga na -adị mgbe niile.
Ozugbo ibe ahụ buru ibu anyị ga -agwa gị nke ahụ a ga -emeworị nzọụkwụ dị mkpa.
Ugbu a soro usoro niile ị gụrụ na paragraf ndị dị n'elu ka ihichapụ akaụntụ Aliexpress na PC.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na a jụọ gị n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ịga n'ihu na ụdị kọmputa site na ekwentị mkpanaaka gị, ị ga -aza ee mgbe niile. Echela na site n'inwe ngwa Aliexpress ị ga -enwe ike ihichapụ akaụntụ gị ebe ahụ n'ihi na site na Aliexpress ha anaghị ekwe ka eme nke a.
Hichapụ akaụntụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi
Dịka anyị kwuru na mbụ, otu ihe bụ ihichapụ akaụntụ na ihe ọzọ ka ihichapụ data gị wee hichapụ ya kpamkpam. Iji mee nke a, ọ ga -abụrịrị site na ibe nzuzo Aliexpress. Ugbu a, ị ga -eme ya na PC ma ọ bụ ihe nchọgharị mkpanaka gị. Cheta na ọ bụrụ na ị nọ na ekwentị mkpanaaka gị, ị ga -agbalite ụdị nke desktọpụ ahụ ọzọ. Anyị na -akwado ime ya site na kọmpụta nkeonwe gị, ọ ka mma. Iji hichapụ akaụntụ gị, ị ga -eso usoro ndị a:
Banye na ngalaba nzuzo nke Aliexpress ma mgbe nke a banye na akaụntụ Aliexpress gị
I gha eme pịa bọtịnụ na -ekwu hichapụ akaụntụ m ma ọ bụ n'asụsụ Bekee «hichapụ akaụntụ m»
Ọbụlagodi na ịdọ aka na ntị apụta, leghara ya na pịa ọzọ Kedu ihe ịchọrọ ihichapụ akaụntụ gị?
I gha eme mepee email gị emetụtara ị ga -ewepụta koodu nkwenye ha na -enye gị wee mado ya na Aliexpress ebe egosiri ya
Ugbu a na dị ka nzọụkwụ ikpeazụ ị ga -anakwere ihe niile ha tinyere n'ihu gị, ya bụ, kwado ọrụ site na ide "kwenye" ​​ma ọ bụ gosi, n'ụkpụrụ ọ na -abụkarị na Bekee. Ọ bụrụ na mgbe usoro a mechara, windo ọzọ pụtara, ị ga -ahọrọ ọzọ "Hichapụ akaụntụ m" ọ ga -abụkwa.
N'oge a, anyị ga -agwa gị na ihichapụla akaụntụ Aliexpress gị. Ugbu a alala azụ n'ihi na ị gaghị enwe ike. N'ezie, ị ga -eji akaụntụ ọhụrụ malite. Chee na ha ga -aga n'ihu wezuga mmekọrịta ọ bụla gị na ha nwere. A ga -ehichapụ data gị niile n'ime awa 24 na -esote site na nchekwa data Alibaba, onye nwe Aliexpress ecommerce.
Anyị nwere olile anya na akụkọ ahụ enyerela aka nakwa na usoro ị ga -eso dị mfe. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Otu esi ehichapụ akaụntụ Aliexpress gị, site na nzọụkwụ